Global Voices teny Malagasy » Miady hevitra ny blaogy Bangla: Saddam sa i Bush? – iza no meloka indrindra? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2019 6:47 GMT 1	 · Mpanoratra Aparna Ray Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, India, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2007)
Nifarana tamin'ny vaovao lehibe mikasika ny famonoana an'i Saddam Hussein tany Iràka ny taona 2006. Navoaka tao amin'ny Aterineto ny sary maro momban'ny fanantonana azy izay nahaketraka olona maro nanoloana ireo fampijaliana natao taminy nandritra ireo ora nahafatesany. Hipoka fihetsehampo maro nanoloana ilay zava-nitranga ny tontolon'ny blaogy ary tsapa tao amin'ny tontolon'ny blaogin'i Bangladesh ny fimonomononana. Tany Bangladesh, hatezerana no fihetsika voalohany nasehon'ny ampahany tamin'ireo blaogera, indrindra fa natao tamin'ny andro voalohany tamin'ny Eid  ilay famonoana, andro misy dikany lehibe ara-pinoana ho an'ireo Silamo. Namahana izay hatezerana izay ilay lahatsary. Na dia ny governemanta Irakiana aza no nanao ilay famonoana, nanao adihevitra mafana mikasika ny anjara asan'ny Etazonia tao anatin'izany dingana rehetra izany ireo blaogera. Nahatonga ireo blaogera hanameloka ilay fanantonana mihitsy aza izany fomba fijery izany.
Raha naneho hevitra mikasika ilay lahatsary, nanasongadina ny hatezerana niparitaka tany an-dalambe tany Iraka i Ali . Tao anatin'ny lahatsorany, nanehoany hevitra ihany koa ny mikasika ny tsy fahombiazan'ny politikan'i Bush tany Iraka sy ireo fahafatesana maro naterak'izany.
Nahatsapa i Anrinya  sy i Abu Saleh  fa tsy famonoana olona voaheloka vokatry ny didim-pitsarana fa mitovy kokoa amin'ny vono olona ilay fanantonana an'i Saddam. Nahatsapa ihany koa i Saleh fa noteren'i Etazonia ho toy ny fampitandremana ilay datin'ny fanantonana ary ho an'ireo Silamo amin'ny ankapobeny ihany koa. Tao amin'ny lahatsoratra nosoratany, nabaribariny ny herisetra Amerikana any Iraka ary nantsoiny ireo Silamo mba hitambatra hanohitra ny famoretana sy fanompàna toy izany.
Nizara ireo ahiahiny momba ny tsikombakomba tamin'ilay daty nofidiana hanaovana ny fanantonana an'i Saddam i Fajle Ilahi  . Taorian'izany izy dia nanararaotra ilay fotoana mba hisaintsainana mikasika ireo korontana ankehitriny ao Iraka taorian'i Saddam. Nanome tsiny ireo tafika miara-dia amin'i Etazonia sy i Grande-Bretagne izy, izay, araka ny filazany dia miasa mba hampitoniana ny antokon'olona Jiosy (sy mpankahàla Silamo) amin'ny alàlan'ny fitondràna faharavàna ao amina firenena Silamo iray. Raha toa ka mendrika an'i Saddam ny hovonoina noho ny famonoana olona miisa 148, hoy izy nanontany, sazy inona no tokony homena an'i Bush sy Blair noho ny isan'olona maro novonoin'izy ireo sy ny faharavana naterak'izy ireo tao Iràka? Toy ny nataon'i Saleh tetsy ambony, niantso ho amin'ny firaisan'ireo Silamo mba hiadiana amin'ny herisetran'ny Tandrefana ihany koa i Ilahi.
Blaogera sasany maro, raha toa ka nanaiky ireo zava-dratsy mahatsiravina vitan'i Saddam, no nahatsapa fangorahana tamin'ny famonoana azy, indrindra taorian'ny nahitana ilay lahatsary nampiseho azy nofatorana. Amin'ny lafiny iray hafa, niaraka namorona ny sarin'i Saddam ho toy ny niharam-boina kokoa fa tsy ny an'ny mpanota ilay lahatsary sy ilay daty tsy nifanaraka. Arakaraky ny nitoboan'ireo resaka, tonga hatramin'ny fiantsoana azy ho toy ny martiora mihitsy aza ny sasany. Tamin'izany fotoana izany, niantso hisian'ny fandinihantena i Alvi , nilaza fa tao anatin'ilay dingana fanalana baraka nataon'i Bush, ny vahoaka tsy tokony hanandratra an'i Saddam, mpanao didy jadona mahatsiravina, ho toy ny olona tsara .
Zavatra mahaliana, niteraka adihevitra mikasika ilay olana lehibe kokoa momba ilay fanamelohana ho faty mihitsy aza ilay lahatsary momba ilay famonoana. Mitanisa ireo tranga hafa izay nanambarana ny fanamelohana ho faty tany India, nanontany tena i Trivial Bytes  raha toa ka fomba fandresena lahatra mahomby ny fanamelohana ho faty, na tokony haverina dinihana lalina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/23/137703/
 Abu Saleh: http://www.somewhereinblog.net/fayezblog/post/28692475
 Fajle Ilahi: http://www.somewhereinblog.net/Fazalblog/post/28692447
 Trivial Bytes: http://bhadra.wordpress.com/2007/01/01/death-penalty-capital-punishment/